साथी जस्तै यि बुवा छोरी । आमा चाईनिज, बुवा नेपाली- छोरी यति राम्री । किन भयो, आमासँग डिभोर्स ? (भिडियो हेर्नुस) – सुदूरखबर डटकम
label sudurkhabar query_builder June, 12 2019
काठमाडौं- बिगत १६ बर्ष अगाडी देखि साँगितिक क्षेत्रमा क्रीयाशील सँगीतकर्मी चेतन राज कार्की आजभोलिका निकै नै ब्यस्त सँगीतकर्मी हुन । १४/१५ बर्षको कलिलो उमेरदेखि नै हातमा गिटार खेलाउँदै हिडेका चेतन निकै नै प्रतिभाशाली छन । उनलाई गिटार मात्र नभैइ प्राय सबै बाजाहरुको राम्रो ज्ञान् छ र बजाउन पनि उतिलै सिपालु छन । आज भन्दा केही बर्ष अगाडीसम्म ऊनी म्युजिक ईन्स्टिच्युचमा गिटार लगायत अन्य बाजाहरु र स्टाफ नोटेसन सिकाउथे ।
पछिल्लो समय चेतन आफ्नो छोरीसँग पापा पुगु नामले युटुबमा भ्लग पनि बनाउँछन् । जुन निकै हिट छ । उनी सँगै उनको छोरीका हजारौं फ्यान छन् । साथै यो जोडी यतिबेला अन्तर्वार्ताहरुमा पनि भाईरल छ । सानै बर्षमा चिनयाँ युवतीसँग बिहे गरेका चेतन र दिक्षिता बाबु छोरी जस्तो हैन, साथी जस्तो देखिन्छन् । बिहे अघि नै जन्मेकी दिीषता १४ बर्षकी भईन् । कसरी भयो चिनियाँ र नेपालीको बिहे ? कसरी भयो डिभोर्स ? हेर्नुहोस, आमा सम्झेर सधैं रुन्छिन्, पुगु अर्थात् दिक्षिता । भिडियो हेर्नुस
पाँच कानुनलाई दिपावलीले स्वागत गर्ने
चिठ्ठामा २१ अर्ब जितेपछि श्रीमान छोडेर चोरसँग बिबाह गरिन एक महिलाले
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कारमा के कस्ता सेवा सुविधा छन त ? जानकारी लिनुहोस अचम्मैका तथ्य
अष्ट्रेलिया जाने रहर पुरा गर्न भाईसँगै विवाह !
पप गायिका स्विफ्ट बनिन विश्वमै सर्वाधिक बढी कमाउने
राम-रावणकालका ऐतिहासिक स्थल अझैपनि श्रीलंकामा पगिले झै अहिले पनि चर्चित छन ।
२०० बढी प्रेमीसँग असफल सम्बन्ध भएसँगै मोडेलले नै गरिन कुकुरसँग विवाह !
नेपालकै सबैभन्दा राम्रो Hand Writing भएकी १३ बर्षकी नानी । ८ कक्षामा पढ्ने प्रियँकाले टाईप गरे जस्तो अक्षर लेख्छिन् (भिडियो हेर्नुस)
जलवायु परिवर्तनले यसरी तातिँदै छ पृथ्वी, कुनै दिन नेपाल विश्वकै तातो ठाउँ बन्न सक्ने !